Siri yeMac ichave iri chokwadi kutanga zhizha rino. | IPhone nhau
Sezvo imi mese muchiziva, uye kana ndikasatokutsanangurirai izvozvi, Siri anga aripo pamidziyo yeIOS kubvira 2011, kunyanya kubva panguva iyo iPhone 4S payakatengeswa muzhizha regore rimwe chetero. Semushandisi weMac kwemakore akati wandei izvozvi, ndagara ndichifunga kuti: sei vasati vatoburitsa chimwe chinhu chakafanana kumakomputa? Zvakanaka ndinofunga handizove nemhinduro kumubvunzo iwoyo, asi zvinoita sekudaro Siri yeMac chichava chaicho kubva kunotevera vhezheni.
Mifananidzo yechinyorwa ichi, rakabudiswa neMacRumors, ratidza a yakazara ruvara icon paDock matiri kuona denderedzwa nemaSiri mafungu eIOS 9 mukati uye imwe mubhawa repamusoro matinoverenga chete chinyorwa "Siri" mukati mekwere. Masosi anoti kudzvanya imwe yemabhatani maviri kunounza iwo chaiwo mafungu eSiri pane chero chinhu cheapuro, asi iyi haisi iyo yega nzira yekufonera Siri paMac.
Siri yeMac ichatsigirawo "Hei Siri"
Zvingave sei (kana zvisingafanire) kuve neimwe nzira, "Hei Siri" ichave iripo pane OS X. Chimwe chinhu chaisazonzwisiswa, nekuti basa racho rinowanikwa pane chero chinhu chinowirirana cheIOS icho, zvirinani, chakabatanidzwa kune magetsi. Ehe, masosi anoti sarudzo yacho icharemara nekutadza, hazvizivikanwe kana kuchengetedza bhatiri mune iyo MacBook kana nekuti kuvandudzwa kweSiri yeMac kuchiri mumatanho ayo ekutanga.
Siri yeMac ichakwanisa kuita zvinoita zvakafanana neIOS, sekupindura mibvunzo kana kuvhura mafomu, asi zvimwe zvinhu zvinoramba zvisina kujeka: yekutanga, uye iyo yandinofunga inonyanya kukosha, ndeyekuti ichave ichiwanikwa here kumakomputa ese anoenderana neOS X 10.12. Hapana chinhu chinoita kuti tifunge kuti aiwa, asi isu takaona mafambiro asingawanzo kuitwa naTim Cook nekambani. Chechipiri ndechekuti Siri yeMac ichave nezwi here kana kuti kwete, uye ndinotaura izvi nekuti kana iyo WatchOS vhezheni kana iyo Apple TV vhezheni isingataure, ivo vanongopindura mirairo.
Zvinotarisirwa kuti OS X 10.12 Ichaiswa muna Chikumi 13, asi haizoburitswa kusvika munaGunyana kana Gumiguru wegore rino. Izvo zvichave izvo apo isu patinotanga kutaura zvinonzwika neMacs edu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Zvinoenderana nemufananidzo uyu, Siri achave aripo paMac
Nhau dzandinobvunza Apple yeIOS 10